မြန်မာမော်ဒယ် နန်းခင်ဇေယျာသည် Miss International 2012 People's Choice Award တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေပြီး အွန်လိုင်းမှမဲအများဆုံးရရှိနေသည် - News-Myanmar
MNL League Tabel
Football Live Channel
e-book Myanmar Version
NewPost (ပို့ စ်တင်နည်း)
E-Mail Form(သတင်းများပေးပို့ ရန်)
Click Daily Money for you
, ပြည်ပ မြန်မာ သတင်း
» မြန်မာမော်ဒယ် နန်းခင်ဇေယျာသည် Miss International 2012 People's Choice Award တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေပြီး အွန်လိုင်းမှမဲအများဆုံးရရှိနေသည်
မြန်မာမော်ဒယ် နန်းခင်ဇေယျာသည် Miss International 2012 People's Choice Award တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေပြီး အွန်လိုင်းမှမဲအများဆုံးရရှိနေသည်
Written By Åüñg Kÿáw Sôë on Friday, October 5, 2012 | 11:48:00 PM
ဖြူပါစေ . မဲပါစေ . တုတ်ပါစေ . ၀ပါစေ . ပုပါစေ . သေးပါစေ။ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုပြီဆိုရင် အားပေးမယ်။
ဗိုဒ့်ကြပါဗျို့ မြန်မာပြည် လူသန်းပေါင်း ၆၀ ရှိတာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သူကို မဲထည့်တာ ၁သောင်းတောင် မပြည့်သေးဘူး။ ရှက်တယ်။ မီဒီသမားတွေက ဒါမျိုးဆိုရင် နှုတ်ပိတ်ထားသလိုဘဲ။ http://poll.pollcode.com/u7r1ht Miss International Beauty Pageant 2012Like · · Share · 44 minutes ago
By : i Love Myanmar
Zayar Real and 235 others like this.
Khee Reh ဒါပေါ့ အရမ်းဂုဏ်ယူတယ် .... အားပေးရမယ်
43 minutes ago · Like · 3
Suchit Aungaung မြန်မာမလေး အလှဆုံးပဲဗျို့ ....
41 minutes ago · Like · 5
Shweyi Wynn Vote p p
Sanzaw Oo ဂုဏ်ယူပါတယ်..
Khaingthazin Tun ညိုချောလေးပါ။အကြည့်ခံတယ်။
Chan Myae Khine How many of 60 millions are having the chance to access Internet? :P
27 minutes ago · Like · 2
Ko Myo Lay ၁
KhinMe MeThein Vote p p မနေ့ကတည်းက .:)
Levi Sap Nei Thang နေ့တိုင်း vote လို့ရတယ် :)
Kyaw Zayya mal pay lite p ..byar..
Yewint Han already ;-D
ပြိုင်ပွဲဝင်နေဆဲ နန်းခင်ဇေယျာ။ မြန်မာမော်ဒယ် နန်းခင်ဇေယျာသည် Miss International 2012 People's Choice Award တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေပြီး အွန်လိုင်းမှမဲအများဆုံးရရှိနေသည်။ နန်းခင်ဇေယျာအား မဲပေးလိုပါက http://www.pageantology.net/t569-pageantologynet-miss-international-2012-people-s-choice-award#1154 တွင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ နန်းခင်ဇေယျာ၏ ဖေ့စ်ဘွတ် အကောင့်မှာ https://www.facebook.com/nang.khin ဖြစ်ပါသည်။Like · · Share ·4hours ago November Rain, Pone Nyet, Moh Win and 471 others like this.
Ko Lynn Khine ချစ်ချာယေး ပအို.၀တ်စုံလေးနဲ.ကပိုလှတယ်။
Nayrein Linn ကျေးဇူးပြုပြီး link မှာ like ပေးကြပါ
Nayrein Linn https://www.facebook.com/media/set/?set=a.137306436415628.44897.132781446868127&type=3
【Delegates' Profiles】 Myanmar by: Miss International 2012
4 hours ago · Like · 15
Kyaw Zin forward forward!!!
Kyaw Zin horrayyy!!!!
Mai Xinh Dep http://www.pageantology.net/t569-pageantologynet-miss-international-2012-people-s-choice-award
Pageantology.net - Miss International 2012 People's Choice Award www.pageantology.net
Welcome to Pageantology.net - Miss International 2012 People's Choice Award Okin...See more
Ar Mrat Khine ရမှာပေါ့ ဒီက တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်တွေ ပေးထားကြတာလေ
Than U Tu Like လုပ်ရင်း အရှိန်လွန်သွားတာပါ
Ei Mon ဂုဏ်ယူပါတယ် နိုင်ငံတကာမှာ ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာမလေးတွေ ၀င်ပြိုင်ရတာ
Myat Kyaw Thu ရှမ်းပြည်ကစော်တွေကဒီထက်အဆတစ်ရာသာတယ်..
Jang Maw Nan Hpung တို့ရှမ်းပြည်က စော် မရှိပါဘူး အမျိုးကောင်း သမီးတွေ ဘဲရှိတာပါ . . .
3 hours ago · Like · 28
သံလွင် ငယ် သူပြောချင်တာက စော်ဘွားမျိုးတွေလိုပြောချင်တာထင်တယ်..ခွင့်လွတ် လိုက်ပါသယ်ရင်း
3 hours ago · Like · 6
Yhal Htet Aung Saw = Kg Ma Lay in Myanmar Idiom :)
Har Kwar ဟိုင်းပါ........
တိတ်တဆိတ်လွမ်းဆွတ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပါရစေ ထိပ်ထားလိပ်ပြာငယ် ဟုတ်တယ်ရှမ်းမလေးတွေကပိုတယ်ထင်တာပဲ.........
Nay Paing ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော အဲဒီညီမလေးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ပးလို့ 
2 hours ago · Like · 7
Hay Won ဟုတ်တယ် ညိမလေး ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်
Nang Ohm Kham Shwelone.com (ရွှေလုံး) | Myanmar Social Entertainment News Network.Facebook
တွင် ပျံ့နှံ့နေသော မဲပေးရန် link မှာ အမှန် ဖြစ်ပြီး နန်းခင်ဇေယျာကိုယ်တိုင် သူမ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် မဲပေးကြပါရန် share ပေးထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အဆိုပါ link တွင် ပြိုင်ပွဲဝင် ၂၄ ဦးသာ ပါရှိနေခြင်းမှာပြိုင်ပွဲဝင်များအား group ၄ ခု ခွဲပေးထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Group အားလုံးကို ဤ link တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ http://www.pageantology.net/t569-pageantologynet-miss-international-2012-people-s-choice-award
မဲပေးသည့် စနစ်မှာ ၁ ဦးလျှင် တစ်ရက် တစ်ကြိမ် မဲပေးခွင့် ရှိပြီး တစ်ဦးတည်းက ရက်ခွဲ၍ အကြိမ်ကြိမ် မဲပေးမှုကို လက်ခံသဖြင့် နောက်ရက်များတွင်လည်း ထပ်မံ သွားရောက် မဲပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
2 hours ago · Like · 4
မီုး စက် commonhacker.net
Nwe Zaw ပေးမယ် ပေးမယ် နေ့တိုင်းပေးမယ် about an hour ago · Like · 1
Ei Phyu ဘာတွေပေးနေတာလဲသူငယ်ချင်း...ငါ့ကိုလည်းပေးပါလား :P
Minn Khin ကြိုက်တယ် ရှမ်းမလေး
Nant Phyu Zin Khaing အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်
Nant Phyu Zin Khaing 5929 votes ရှိသွားပြီ
Pone Nyet She is soo beautiful...
U Zaw Zaw မြန်မာကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ အောင်မြင်ပါစေဗျာ........တစ်ကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ဆုတေင်းပေးတာပါ
Thantzin Cinou လှမှလှ :-) about an hour ago · Like
Naihongsar Chan ရှမ်းမ မဖြစ်နိုင်ဘူး ပအို့ ပြစ်နိုင်တယ်
Akk Yangon congraltuation
Mgmg Htut သူကလျလည်းလှ ပြလည်းပြနိုင်လောက်သည် ဒါကြောင့်ဆုရနိုင်ပါသည်..
Soe Linn ပြိုင်ပွဲ ဝင် နိုင် ဘို့ စပွန်စာ တော် တော် ကောင်း တယ် ထင် တယ်...မြန်မာ့ အားကစား က ကမ္ဘာ မလွှမ်း တော့...လွှမ်း ခြင် တယ် ထင် တယ်...
Win Kyaw ၇၂၄၈ votes ရှိသွားပြိံ
Win Kyaw She is elegant--
Min Chit Thu ပေးပြီးပြီဗျ ဟဟြဲ ဒါဘဲလိုက်ရေးနေရတယ် ပို့ တွေကို လူတိုင်းတင်ထားတာလည်းပါတယ် ဒါကြောင့် တို့ တွေဦးဆောင်နေတာ
Hninn Thet Yadana Oo akaung myin pay kya par ohm
Deborah Aung Ok I voted her but don't know how she looks like , talent , her age , height ,.....not mentioned in her page .....
Åüñg Kÿáw Sôë ဖြူပါစေ . မဲပါစေ . တုတ်ပါစေ . ၀ပါစေ . ပုပါစေ . သေးပါစေ။မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုပြီဆိုရင် အားပေးမယ်။ဗိုဒ့်ကြပါဗျို့
မြန်မာပြည် လူသန်းပေါင်း ၆၀ ရှိတာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သူကို မဲထည့်တာ ၁သောင်းတောင် မပြည့်သေးဘူး။ ရှက်တယ်။ မီဒီသမားတွေက ဒါမျိုးဆိုရင် နှုတ်ပိတ်ထားသလိုဘဲ။http://poll.pollcode.com/u7r1htMiss International Beauty Pageant 2012
Pageantology.net - Miss International 2012 People's Choice Award poll.pollcode.com
‎1. Myanmar - 3,085 votes2. Guatemala - 774 votes3. Philippines - 416 votes4. Po...See more
4 minutes ago · Like · Remove Preview
Nyein C Aye ၀ုတ် ပြိးပြီးဟေ့ ....ကိုယ့်မြန်မာ အတွက်
Share this article : Labels ( အမှတ်အသား ):
ပြည်ပ မြန်မာ သတင်း
comments ( မှတ်ချက်များ ):
News-Myanmar မှသတင်းများကို Facebook ပေါ်မှာ ဖတ်လိုလျှင် အောက်မှ Follow နှင့် Like ခလုတ်အား Click နှိပ်ခဲ့ပေးပါ။ (သတိပြုရန် // အမှန်ခြစ်ပေါ်နေလျှင် နှိပ်ရန်မလိုတော့ပါ။)
ဒီဆိုက်လေးပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့MyanPay ကနေကူညီရန်
Download Myanmar Fonts Ayar fonts & unicodeFont: Zawgyi, mm3, Myanmar1mm3 fontZawgyi for Window7- 64 bitZawgyi Installer
ကြော်ငြာထည့် သွင်းလိုပါကFacebook တွင် Like လုပ်ခဲ့နိုင်ပါသည်Google+ အသစ်တင်တိုင်းသိရှိလိုပါကLikeလုပ်ခဲ့ပါအမှန်ခြစ်ပေါ်လျှင်Like ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်▼
Chat Box (မှတ်ချက်လေးများပေးခဲ့ နိုင်ပါသည်)
News-Myanmar Mobile Apk
▼apk ကို Download ပြုလုပ်ရန်အောက်ပါပုံကိုနှိပ်ပါ▼New Version Apk<!-currency converter widget - html code - fx-rate.net --> Kyat Exchange Rate <!-end of code--><!-currency converter widget - html code - fx-rate.net --> Myanmar Kyat Converter<!-end of code-->
Use Online Counter
Mail-ထဲမှ စောင့် ဖတ်ရန် အသစ်တင်တိုင်းပို့ ပေးပါမည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာလေးထားခဲ့ပေးပါရန် မြန်မာသက္ကရာဇ်မြန်မာပြည်စံတော်ချိန်
တင်ပြီးသားများ ရက် , လအလိုက် ကြည့် ရန်
Jun 24 (77)
Jun 21 (40)
Jun 20 (62)
May 22 (78)
May 19 (42)
Dec 24 (37)
Sep 29 (32)
Sep 26 (24)
Dec 29 (18)
Sep 18 (33)
Tags (အမှတ်အသားများနှင့် ရှာကြည့် ရန်)
Connection Speed Up
Last 10 Day's Update Post
widget @ surfing-waves.com Popular Posts(လူကြည့် အများဆုံးပို့ စ်များ)
ဆေး-၁ မှဆေးကျောင်းသားလူယုတ်မာအကြောင်းများ (သေဆုံးသူကောင်မလေးရဲ့ ဝမ်းကွဲညီအစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်များ အပိုင်း - ၂ )
အောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမဖတ်ခင် ကျွန်တော့် အာဘော်လေးနည်းနည်းကိုပြောချင်ပါတယ် ဒီအကြောင်းအရာလေးကို မနေ့ က 22.1.2014 နေ့ လည်ပိုင်းလောက်...
ဆေး-၁ မှဆေးကျောင်းသားလူယုတ်မာအကြောင်းများ (သေဆုံးသူကောင်မလေးရဲ့ ဝမ်းကွဲညီအစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်များ အပိုင်း - ၁ )
Khanmon Htwe January 10 -20.4.2013 -7:00am -someone called me n didn't say anything -20.4.2013 -9:00am -th...
“ငါလူဝတ်လဲတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လူမှုအကျိုးပြု ပရဟိတ အလုပ်တွေကို အားစိုက်ပြီး လုပ်ချင်လို့ လူဝတ်လဲလိုက်တာပါ၊ လောကီ ကာမဂုဏ် ခံစားချင်လို့ မဟုတ်...
မြန်မာမိန်းကလေးများ online ပေါ်တွင် sex ကိစ္စပြောဆိုခြင်း၊ပြသခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ(ပေးစာ)
မြန်မာမိန်းကလေးများ online ပေါ်တွင် sex ကိစ္စပြောဆိုခြင်း၊ပြသခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ(ပေးစာ) ဒီလို Chatting မျိုးကအနောက်တိုင်း မှာအင်မတန်ရေပ...
ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းက ကျွန်တော် အဆုံးမသတ်ခင်မှာဘဲ ပေါ်လွင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီအတွက် ၀င်ရောက်ရေးသား ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့...
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း ပြဿနာ အဖြေရှာ
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကို ဆယ်ယူရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် သင်္ဘောနှင့် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အား ၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - AFP အခုရက...
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ သင်္ဘောကြီးတစ်စင်းအကူအညီယူမည်
ရေအောက်မှဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းအားဆွဲတင်ဆယ်ယူနိုင်ရန် နိုင်ငံ တော်နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး သင်္ဘောကြီးတစ်စင်း တောင်းယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မွ...
RNDP စစ်တွေ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မြကျော် ပိုလန် သို့ သင်တန်းသွားမည်
RNDP စစ်တွေ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မြကျော် ပိုလန် သို့ သင်တန်းသွားမည် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စာ...
မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အားဖြည့်ပေးဖို့ အမေရိကန်ကြိုးပမ်း
အမေရိကန် အာဆီယံ ထိပ်သီး စီးပွားရေးညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန စီးပွားရေးနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လက်ထောက...
သင်ယူမည့် မိန်းကလေး အပျိုစစ်မစစ် ဒါကဆေးပညာ နှင့် ဆိုင်သော ဗဟုသတ တစ်ခုမို့ ပြန်လည် Share လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ယောက်ကျားလေးတိုင်းသည် ကိုယ်ယူမည့် မိန်းကလေး ကိုယ်ယူလိုက်တ...
Myanmarupdates ( All Update )